Dibi iyo Bears Ikhtiyaar ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Astaamaha ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah: dibi iyo bears oo ku yaal suuqyada maaliyadeed
Sida dhaqdhaqaaqyada kale oo dhan, ka ganacsiga suuqyada maaliyaddu waxay leeyihiin hal-ku-dhegyo xirfadeed oo u gaar ah, wakiillada ugu caansanna waa «dibi» iyo «orso». Dhammaan isweydaarsiga iyo hantida, iyagu waa wadayaasha ugu weyn ee isbeddelada qiimaha, oo aan u fiirsano si faahfaahsan si aan u ogaano sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah .
Aynu ku bilowno qeexitaannada :
Dibiga - Ganacsatada macaashka ka hela kororka qiimaha lamaanaha iyo furitaanka boosaska iibsiga (BUY);
Bear - ganacsatada lacagta sameeya iyagoo yareeya qiimaha lacagta lamaanaha iyo furitaanka boosaska iibka (Iib).
Halganka dibiyada (iibsadayaasha) iyo bears (iibiyaasha) waxaan si joogto ah ugu fiirsanaa isbeddellada ku saabsan jaantusyada qiimaha:
In kasta oo xaqiiqda ah in iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu ay adeegsadaan isla aaladaha falanqaynta farsamada - ma jiraan istiraatiijiyad si gaar ah u liidata ama u dulqaadasho ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah, isbeddellada si gooni ah ayaa looga ganacsadaa. Haddii heshiisyada intraday ganacsaduhu ku tababbaraan furitaanka BUY iyo Iib, labadaba cilmu-nafsiga wuxuu bilaabmayaa inuu saameyn ku yeesho jagooyinka dhexdhexaadka iyo muddada-dheer. Waxaa jira fikrad deggan oo ah in kor u kaca uu yahay 'sax', oo markaa hoos u dhaca ayaa 'khaldami doona'. Aynu tixgelinno sababaha habdhaqankan oo faahfaahsan oo aan ka bilowno dibiyada:
Kobaca sicirka waxaa sababi kara arrimo dhaqaaleedka dhaqaalaha, sida faragelinta lacagaha ee bangiyada Dhexe ama ficillada kale ee maamulayaasha gobolka si loo xoojiyo lacagta waddanka. Dabcan, waxaa jira xaalad ka soo horjeedda, tusaale ahaan, Bangiga Japan ma xiiseynayo koritaanka Yen, laakiin tan ugu weyn ee hanti kasta haysaa waa kuwa sameeya suuqyada waaweyn ee leh lacag ku filan oo ay "ku riixaan" sicirka kor u qaadista yoolalka istiraatiijiyadooda;
Had iyo jeer way fududahay qofku inuu aqbalo koritaanka halkii uu ka noqon lahaa hoos u dhac, oo warbaahinta ayaa ku fikiraysa tan. CNBC waxay isbarbar dhig gaar ah ku sameysay falcelinta isbeddelada tusmada NASDAQ: markii ay hoos ugu dhacday 400 dhibcood, ma aysan keenin xiisa culus, koritaanka isla qaddarka ah wuxuu horseeday duufaan farxad leh. Suuqa sameeyayaashu waxay aad u xiiseynayaan khubaro ka dhaadhicisa ciyaartoy yaryar inaanay jirin dhicitaan, laakiin kaliya «hagaajin xamil» oo ku saabsan istiraatiijiyadda ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah. Way ka fududdahay in lagu qanciyo inay wax ku iibsadaan qiimo mala-awaal ah halkii laga saari lahaa suuqa hal tallaabo oo adag.
Joogitaanka ciyaartoy waaweyn ayaa leh dhinac togan: waxaa jira lacag badan oo badan oo suuqa taal; guud ahaan, dhaqdhaqaaqyada bullaacadda ayaa ka dheer oo la sii saadaalin karo. Dhammaantood waa barashada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah inay ganacsadaan inta lagu jiro xilliyada koritaanka .
Aynu u gudubno suuqa orso, halkaas oo sifo astaamo ah isla markiiba la arki karo - in kasta oo hoos u dhac guud uu jiro, ma jiraan wax dhiirrigelin ah oo qiimo leh iyo sixitaan. Ganacsatada dibida ee caadeystay dhaqashada wax iibsashada iyo is bedbedelka qiimaha aadka u sarreeyaa waxay la kulmaan dhibaatooyin waaweyn - si fudud uma haystaan calaamado tilmaam ku filan oo ay ku furaan meheradaha:
Waxaa jira wakhtiyo maqnaansho dhammaystiran oo isbeddel la'aan ah. Bears sifiican ayey uga warqabaan "aaga dhintey" inta lagu gudajiro fadhiga yurub, oo dhaca inta udhaxeysa 12-14 saacadood, marka ciyaartooyda waaweyn ay nasiino u qaataan qado ayna falanqeeyaan xaalada taagan. Suuqa wuxuu bilaabmayaa inuu bixiyo calaamado ganacsi oo nool oo been abuur ah; dhaqdhaqaaqyadu waa kuwa cimri-gaaban oo baaxad ahaan ku yar. Iyo haddii xaaladdan oo kale la arkay dhowr toddobaad, markaa waa iska cadahay sababta hoos u dhigista loogu arko inay tahay niyad jab.
Dhaqdhaqaaqa maalgashadayaasha iyo kuwa sameeya suuqa ayaa si joogto ah hoos ugu dhacaya. Ku dhowaad dhammaan iibsadayaasha yaryar ayaa laga saaraa suuqa, mugga suuqyada ayaa hoos u dhacaya, natiijada ka soo baxda, falanqaynta farsamada ayaa bilaabeysa inay si liidata u shaqeyso: heerarka taageerada / iibku waa lagu kala jabay dhaqdhaqaaq kasta oo mala awaal ah, xad dhaaf / oscillators (MACD, RSI iyo kuwa kale) waxay ku xayiran yihiin heer ka sarreeya oo ha u caddeyn meesha isbeddelku ku dhammaan doono. Waxay u muuqataa in "hoose" la helay, iibsigu wuu furan yahay, sicirkuna wuxuu sii wadaa inuu hoos u dhaco hakad kadib.
Waxay ka timaaddaa xagga kore in ka ganacsiga dhinaca orso loogu talagalay kuwa bilowga ah, laakiin awoodda ganacsigu waa xirfad khasab ah oo ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh. Xaaladdaha qalalaasaha ee dhaqaalaha adduunka ayaa noqday kuwo joogto ah oo sii kordhaya iska horimaadka «dibiyada iyo orsooyinka» kuma dhammaadaan inay doorbidaan iibsadayaasha .
Soo koobid iyo talooyinka isticmaal…
Tani waa kor lagu soo sheegay, laakiin waxay noqon doontaa mid waxtar leh in laguu xusuusiyo: haddii aad tahay qof bilow ah, isbeddellada isweydaarsiga ganacsiga, tani waxay kaa ilaalin doontaa khaladaadka badan. Kordhinta qiimaha ayaa muujineysa xiiso weyn, mar walbana way ka ammaan badan tahay in la raaco ciyaartoy waaweyn;
Waxaa lagugula talinayaa ganacsatada intraday iyo kuwa wax lagu nadiifiyo inay kujiraan isbedelka dibiyada. Kobaca joogtada ah wuxuu ku siin karaa 10-15 dhibco gelitaan wanaagsan maalintii, taas oo aan waligeed ku dhicin isbeddel culeys leh;
Dibi iyo bears suuqa sarrifku waxay noqon karaan isla suuq sameeyeyaal, keliya adoo kordhiya waqtiga oo laga dhigo afar saacadood (H4) iyo ka sareeya, waad fahmi kartaa in suuqu si dhab ah u dhacayo. Maareynta lacagta waa inay ahaataa mid adag, macaashka suuqa orso ayaa si tartiib tartiib ah u urursan: waxaad u baahan tahay inaad xakameyso xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee calaamadaha Forex, ha xiro heshiiska ka hor waqtiga.